''သားကို ရွှေကြိုအနေနဲ့ ရွေးချယ်ပေးလိုက်တာ စစ်မြေပြင်ထွက်မယ့် စစ်သားတစ်ယောက်၊ သူရဲကောင်းတစ? - Yangon Media Group
”သားကို ရွှေကြိုအနေနဲ့ ရွေးချယ်ပေးလိုက်တာ စစ်မြေပြင်ထွက်မယ့် စစ်သားတစ်ယောက်၊ သူရဲကောင်းတစ?
သရုပ်ဆောင် နေထက်လင်း၏သားဖြစ်သူ ထက်လင်းအောင်သည် အကယ်ဒမီရွှေကြိုအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်အပေါ် ဖခင်တစ်ယောက်၏ စိတ်ခံစားချက်များနှင့် သားဖြစ်သူအပေါ်ထားရှိသည့် သဘောထားများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နေထက်လင်းကို ယခုလို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး- သားဖြစ်သူက ရွှေကြိုအနေ နဲ့ ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာ စိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ- တော်တော်လေးကို ဝမ်းသာရပါတယ်။ သားကို ရွှေကြိုအနေနဲ့ ရွေးချယ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင်ရပါတယ်။ စစ်မြေပြင် ထွက်မယ့် စစ်သားတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်လိုက်သလို သူရဲကောင်းတစ် ယောက်ရွေးချယ်လိုက်သလိုပဲပေါ့ နော်။ အဲဒီလိုမျိုးလည်းပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်ပွဲကတော့ အများကြီးတိုက်ရဦးမှာပါ။ တစ်ပွဲ ပြီး တစ်ပွဲတိုက်ပြီးတော့ အနိုင်ရမယ်။ အဲဒီမှာမှ ပရိသတ်ကကောင်း တယ်၊ မကောင်းဘူးဆိုတာကို ဆုံး ဖြတ်ပေးမယ်။ ဝေဖန်အကြံပေးရင်းနဲ့ နေတိုးကို ကျွန်တော်ထိန်း ကျောင်းခဲ့သလို လူလားမြောက် အောင် သွန်သင်ဆုံးမပြီးတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ တစ်နေရာ ဖြစ်အောင် ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ် အောင် ပရိသတ်အတွက်ပေးဆပ် နိုင်မယ့်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်အနေနဲ့ မွေးထုတ်ပေး သွားမှာပါ။
မေး- သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အဖေတစ် ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးတွေ ပျိုးထောင်ပေးခဲ့လဲ။
ဖြေ- ကျွန်တော်က အဖေဆို တော့ ကျွန်တော့်သားကိုဘဝမှာ အကြီးဆုံးတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်။ကျွန်တော့်ဘဝမှာတော့ မင်းသား၊ မင်းသမီးဘဝဆိုတာက အကြီးကြီး ပဲလေ။ အဲဒါကြောင့် သားငယ်ငယ်လေးကတည်းက မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် စားတာ၊ သောက်တာ၊ နေတာ၊ ထိုင်တာအစ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်။ ဘယ် အချိန်ဆို ထရမယ်။ ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင် ပုံသွင်းခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တုန်း ကလည်း ဒါရိုက်တာတွေက ပုံသွင်း ခဲ့တာတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ပုံ သွင်းလို့မရဘဲ ဘုကန့်လန့်တိုက် နေမယ်ဆိုရင် အိုက်တင်တစ်ခုကို ခိုင်းလို့မရဘူး။ လိုချင်တဲ့ပုံစံကို မ ရောက်ဘူး။ ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ ပုံစံရအောင် ကျွန်တော်ပုံသွင်းခဲ့ တယ်။ သူလိုချင်တာလည်း ပေး တယ်။ သူ စိတ်အားငယ်မှုမရှိ အောင်ထားခဲ့တယ်။
မေး- ကိုယ့်ဆန္ဒအတိုင်း သားဖြစ် သူကို မင်းသားလုပ်ခိုင်းခဲ့တာလား။
ဖြေ- အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ သူဖြစ်ချင်တာတွေကို ကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပေးတယ်။ တချို့သူဖြစ်ချင် တဲ့အရာတွေကရတဲ့ ပင်ပန်းတဲ့ ဒဏ်ကိုသူမခံနိုင်ဘူး။ သူလေ ယာဉ်မောင်းချင်တယ်ပြောတယ်။အဲဒါနဲ့ သူ့ဦးလေးရှိတဲ့ အမေရိကန်ကိုပို့ပြီးတော့ လေတပ်ကို သွင်းပေးမယ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတည်းပြောတယ်။ သူက လေယာဉ်မောင်းတဲ့ဟာကို ဂိမ်း ဆော့ရာကနေဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ ဂိမ်းထဲမှာလိုတော့ ခဏခဏသေလို့ မရဘူး။ အပြင်မှာ သေပြီးရင် ပြန် မရှင်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ဆုံး ဖြတ် တကယ်လုပ်ချင်တာလားဆို တော့ အဲဒါနဲ့ သူ မလုပ်တော့ဘူး ဆိုပြီးပြောတယ်။ သူမှာ အိပ်မက် တွေအများကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခု တော့ အဖေဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒအတိုင်းပဲလုပ်တော့မယ် ပြောတာပါ။ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ဆန္ဒကို ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ အတင်းလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာ။
မေး- သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ရဲ့ ပညာဆိုတာက ဘာလို့လက်ခံ ထားလဲ။
ဖြေ- သရုပ်ဆောင်ဆိုတာက အ ဆွေးခန်းမို့လို့ဆိုပြီးတော့ မျက်ရည် တွေ အသားကုန်ကျပြနေလို့လည်း အဆွေးခန်း၊ အလွမ်းခန်းကိုရတာ မဟုတ်ဘူး။ ပရိသတ်ပါ ရောပြီး တော့မျက်ရည်ကျအောင် မျက်ရည်တစ်ပေါက်ချင်း ကျအောင် ဘယ်နေရာမှာ အသေငိုရမယ်ဆို တာမျိုးတွေက သရုပ်ဆောင်တစ် ယောက်ရဲ့ ပညာပဲ။ အဲဒီပညာရပ်က လေ့လာရုံနဲ့မရဘူး။ သင်ယူနေ ရုံနဲ့မရဘူး။ စန်း ဆိုတာရှိတယ်။ စန်းမရှိရင် ဒီအနုပညာနယ်ပယ်မှာ ရပ်တည်လို့ကိုမရတာ။
ပြည်သူများ၏ တိုင်စာအပေါ် လေ့လာစိစစ် သုတေသနပြုနိုင်ရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင်
''ဒီနှစ် အကယ်ဒမီကတော့ လူငယ်လေးတွေ အတွက် ပွဲပါပဲ'' မေသန်းနု
တစ်ကိုယ်တော် အခွေကို ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာ ဖြန့်ချိတော့မယ့် သရုပ်ဆောင် ပွင့်
မန္တလေး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ် ကျွဲတင်ယာဉ် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရ၊ နှစ်ဦးသေဆုံး
ကုလကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအရ မြန်မာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံများအဆင့်မှ လွတ်မြောက်ရန်